बिरालोले बाटो काटे के हुन्छ ? यस्तो छ विभिन्न देशमा जनविश्वास « हाम्रो ईकोनोमी
बिरालोले बाटो काटे के हुन्छ ? यस्तो छ विभिन्न देशमा जनविश्वास
बिरालोले बाटो काट्दा हामी एकछिन अडिएर वा रोकिएर मात्र हिँड्ने गर्छौ । यस पछाडिको रहस्य हामीले नबुझेको वा नजानेको पनि हुन सक्छ । हामी किन बिरालोले बाटो काट्दा दुईदेखि पाँच मिनेटसम्म अडिन्छौं ? वा कोही व्यक्ति बाटो हिँडेपछि मात्र हामी आफ्नो गन्तव्यतिर किन लम्कन्छौं ? सबैलाई चासो हुन सक्छ । बिरालोले बाटो काट्दा रोकिनुको कारण परम्परागत अन्धविश्वास छ भने अर्को वैज्ञानिकता पनि छ । बिरालोले बाटो काट्नु भनेको अशुभ संकेतको इशारा दिनु हो भन्ने मान्यता छ ।
यदि कुनै कार्यका लागि मानिस कहीँकतै जाँदै छ भने उसको त्यो काम नबन्ने र उसलाई शनिको दोष लाग्ने अन्धविश्वास छ । कालो रंगले शनि ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो ग्रहको दोषले मनुष्यको जीवनमा कार्य अवसरमा विफलता र ढिलाइ हुने भन्ने बुझाई छ । यसको मतलब बिरालोले बाटो काट्दा फलदायी कार्य नहुने वा हुन लागेका काम पनि ढिला वा विलम्बित हुन सक्ने जनामानसमा बुझाई छ ।
यसको वैज्ञानिकता भने अर्कै छ । प्राचीन समयमा सडकको दुवै किनारमा विशाल जंगलहरू हुने गर्थे । घरधुरी थोरै हुन्थे । मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न अहिलेको जस्तो यातायातका साधन थिएन । कोसौं पैदलै हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । बिरालो बाटोको बीचबाट दुगुर्नु भनेको त्यसको पछाडि कुनै अर्को ठूलो जनावरले उसलाई आहारा बनाउन खोजेको र ऊ आफ्नो ज्यान बचाउन भागेको तर्कशक्ति पनि बलियो छ ।तसर्थ मानिस सडकको बीचमा अडिनु वा रोकिनुको कारण त्यो ठूलो जनावरलाई पनि बाटो पार गर्न दिनु हो, जंगली जनावर मानिसकै लागि खतरा हुन सक्छ भन्ने मान्यता छ ।
हिजोआज त्यही प्रथालाई पछ्याउँदै अशुभ हुने ठानेर मानिसहरू बिरालोले बाटो काटेमा केही समय अडिने गर्छन् । तर देशअनुसार बिरालोको किंवदन्ती रोचक छ ।बेलायत तथा जापानमा कालो बिरालोले बाटो काट्दा यसलाई शुभ मानिन्छ, जर्मनीमा जब कालो बिरालोले बाटोलाई दायाँबाट पार गर्दछ, त्यसले खराब भाग्य निम्त्याउने र बायाँबाट दायाँ पार गर्दछ भने त्यसले राम्रो भाग्यको उदय गराउँछ भन्ने जनविश्वास छ । इटालीमा एक बिरालो बिरामीको बेडमा बस्छ भने मृत्युले चाँडै पछ्याउनेछ । चीनमा कालो बिरालोलाई अकाल र गरिबीको प्रतीक मानिन्छ । लाटभियामा यदि भकारीमा कालो बिरालोको बच्चा पाइएमा फसल राम्रो हुने मानिन्छ । स्कटल्यान्डमा कालो बिरालो आएर दलानमा बस्दा धन आउने संकेत मानिन्छ ।